ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး Axe Haft | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး Axe Haft
ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး Axe Haft
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 5, 2011 in Myanma News | 11 comments
ဒေါ်စု နှင့် ဆီနိတ်တာမက်ကိန်း
မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ် ကြားဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်များပါ။ နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ ကော်ပရေးရှင်းကြီးတခုမှာ အကောင်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတဦး စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ပြည်တော်ပြန်ပြီး အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူ စစ်ဗိုလ်များထံ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ရိုရိုကျိုးကျိုး စကားပြောရပါသတဲ့။ နို့မို့ရင် ငါလိုကောင်ကို မထီလေးစား လုပ်သလားဆိုပြီး ပညာအပြခံရဖို့ ရှိပါတယ်။ ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ နက္ကတိုင်စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ခြေထောက်ချိတ်ထိုင် စကားပြောရင်တော့ စစ်ဗိုလ်ကြီးများ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံး တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အရာရှိတွေ ပြည်တော်ပြန်လို့ အစိုးရရုံးကိစ္စရှိရင် မျက်နှာဖြူလူမျိုး လက်အောက် ငယ်သားကို ရှိခဲ့ရင် ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါမှ အစိုးရတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များက တူတူတန်တန် လူတွေနဲ့ ငါတို့ ဆက်ဆံရတယ်လို့ ကျေနပ်နှစ်ခြိုက် အားရတော်မူကြပါသတဲ့။ အသိတဦးပြောပြတာလည်း စိတ်ပျက်စရာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာတဦး အကောင်ကြီးကြီးတဦးနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတော့ တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုးဝတ်သွားရင် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုပြီး အမှတ်ရမလားလို့သွားတယ်၊ လူလူသူသူ အတွေ့မခံရလို့ နောက်တခါကြတော့ အနောက်တိုင်း ဝတ်စုံဝတ်သွားတော့မှ တွေ့ခွင့်ရပါတယ်၊ အစောင့်ကတောင် အလေးပြု လိုက်သေးတယ်ဆိုပဲ။
ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး၊ အဆိုးမြင်ဝါဒီများအား ခြေမှုန်းကြ။ ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သူ တို့ရန်သူ၊ ဘာညာကွိကွ စတဲ့ ပုတ်လောက်ရှိတဲ့ စာလုံးကြီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးဖူးကြမှာပါ။ သမိုင်းကြောင်း နာကြည်းမှုကို အသုံးချပြီး ကိုယ်လူမျိုးကိုယ် မြှင့်တင်ပေးတာ၊ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တာ အုပ်ချုပ်သူတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတာမို့ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်သေးတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်အခြေခံမရှိဘဲ ပြောတော့ စပျစ်သီးချဉ်တယ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်မနာခင် သူများ(စစ်တပ်)ကို ထောင်းပြီးရပ်လိုက်ပါမယ်
မနေ့က အာဖက်ရ်အေ မြန်မာပိုင်းမှာ ဘောင်းဘီချွတ်စစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းများကို တိုင်းတပါးသား လူဖြူ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းဓာတ်ပုံကို သူမြန်မာပြည်လာတဲ့ သတင်းထဲထည့်ခွင့်ပြုပြီး ပြည်သူတခဲနက် ထောက်ခံတဲ့ အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတော့ သတင်းဓာတ်ပုံ မပါရလို့ တားမြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ပြည့်အင်အား ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်။ ပြည်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တို့လက်မခံ စတဲ့ အမျိုးသားရေး ဆောင်ပုဒ်တွေ ဘာဖြစ်ကုန်ပါသလဲ။ အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲရှိတိုင်း တရုတ်ကြီး ထံသွားဦးတိုက်ရတာ အမော၊ တကယ်ဆွေးနွေးရမယ့် မြန်မာအချင်းချင်းကိုတော့ သာမန်ပြည်သူတဦးလိုပဲ သဘောထားတယ် ပြောလိုပြော၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လို့ ထိန်းသိမ်းရတယ်နဲ့ အရှက်မရှိ ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်သူက ပြည်ပအားကိုးလည်း၊ ပြည်ပစွက်ဖက်မှုတွေကို ဘယ်သူက ဖန်တီးနေတာလည်းလို့ ဖြုတ်ဥနှောက်ပိုင်ရှင် စစ်ကျွန်များ၊ စစ်အောက်ဆွဲများ မစဉ်းစားတတ်မှာစိုးလို့ အဖြေပေးထားတဲ့မေးခွန်း မေးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံတချို့ စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က ပိတ်ပင်ဟန့်တား
2011-06-04 Credit: RFA Burmese News
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းနဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြခွင့် မပေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာ ဂျွန်မက်ကိန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွဲလျက် ပုံတွေကို ထည့်ခွင့်မရဘူးလို့ စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နီးစပ်သူတယောက်က ပြောပါတယ်။
“အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံတွေ သတင်းတွေ မဖော်ပြရဘူး သိလား။ ဂျွန်မက်ကိန်းနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတွေ ရိုက်ထားတာ အများကြီးပဲ၊ လှလည်း လှတယ်။ အဲဒါ ဘယ်ဂျာနယ်မှာမှ မထည့်ရဘူး။ ဂျွန်မက်ကိန်းကိုပဲ ထည့်တဲ့။ ဒေါ်စု ပါရင် ထည့်လို့ကို မရဘူး။ ဒေါ်စု မပါဘဲနဲ့ ဂျွန်မက်ကိန်း တယောက်တည်းကိုပဲ ထည့်လို့ရှိရင် ထည့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါလို့ရှိရင် မထည့်နဲ့၊ ဒါပဲပြောတယ် သူတို့က”
တချို့ သတင်းဂျာနယ်တွေကတော့ စာပေစိစစ်ရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မစ္စတာမက်ကိန်း တွေ့ဆုံတဲ့ သတင်းတွေ တင်ထားပြီး ဖော်ပြခွင့်ရ မရ မသိရသေးဘူးလို့ ဂျာနယ်တစောင်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ထွက်တဲ့ Favorite ၊The Voice နဲ့ NewsWatch စာစောင်တွေမှာတော့ မပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဈေးကွက်အရ သတင်းဂျာနယ်တွေ အားလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြချင်ကြတယ်လို့လည်း စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Vijay Nambiar မြန်မာနိုင်ငံကို မေလမှာ ရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာကို ဂျာနယ်တွေက မျက်နှာဖုံးသတင်း ဖော်ပြဖို့ စာပေစိစစ်ရေး တင်တဲ့အခါ ပုံကြီး တင်ခွင့်မပေးဘဲ ပုံအသေးပဲ တင်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာတဲ့ သတင်းကို မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြတဲ့အတွက် The Voice ဂျာနယ် အပါအဝင် စာစောင် ၉ စောင် ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အလွမ်းသင့်တယ်လို့ အများက ပြောနေကြတဲ့ ဦးမြတ်ခိုင် အယ်ဒီတာချုပ် လုပ်တဲ့ လျှပ်တပြက် ဂျာနယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေအကြောင်း ဖော်ပြတဲ့အတွက် ရောင်းအား ကောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးဖွားတဲ့နှစ် ၁၉၁၅ ကို ၁၉၁၃ ဆိုပြီး မှားယွင်း ဖော်ပြတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဝါရင့် စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက ထောက်ပြပါတယ်။
” စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ”
အဲဒါကြောင့် သူတို့ပြောတာ ရမ်းမယုံတာ။
မှားယွင်းဖေါ်ပြတာ အဲဒီတခုထဲ မဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့်တော့ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေ ပြောတာကို မှားမှန်းသိလျှက်နဲ့ သို့မဟုတ် သမိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့် မကိုက်ညီမှန်းသိလျှက်နဲ့ ပွဲဆူအောင် ထည့်လွှတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ မသိလို့ပါလို့ တခြားလူငယ်တွေက ပြောရင်လက်ခံနိုင်ပေမယ့် ဦးမြတ်ခိုင်ကပြောရင်တော့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။
ဘောက်မယ်ကြောင့် ဒီလောက်ထိ ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်နေရသလဲ..
တပ်မတော်က နားလည်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ခု ရှိတယ်.
အဲဒါကို အဓိကနားလည်ထားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူအနေနဲ့..
သူ့အင်အားကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ်လို့ ထင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ သူတားဆီးလိမ့်မယ်..
သူတို့ စိုးရိမ်တာက.. (ဖြစ်နိုင်တာက)
ဖော်ပြခွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့… ရေးလာမယ့် ပြောလာမယ့် စကားလုံးတွေ…
သူ့ကို သိလို့ထောက်ခံထားသူတွေရဲ့ အသံ.. သူ့ကို ဘာမှန်းမသိဘဲ ထောက်ခံထားသူတွေရဲ့ အသံ..
သူ့ကို စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဖော်ပြခွင့်ပြုလိုက်တာဟာ..
သူ့အကြောင်း ဆွေးနွေးခွင့်ပြုလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို.. ဖြစ်တာကြောင့်..
ပြီးတော့.. သူ့ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ရှိနေစေချင်ပေမယ့်..
အရေးပါတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လို့ မမြင်စေချင်သေးတာကြောင့်လို့.. ထင်ပါတယ်..
အနောက်နဲ့ သင့်မြတ်သူကော. အရှေ့နဲ့ သင့်မြတ်သူကော.. အတူတကွ လက်တွဲနေတာကိုသာ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..
အရင့် အရင်က ဘယ်လို မပြေလည်မှုလေးတွေပဲရှိရှိပေါ့…
တစ်ချိန်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေက.. မြန်မာဆိုတဲ့ နိုင်ငံ အတွက်..
အမဲစက်လား… ဒါမှမဟုတ်.. သမိုင်းမှာကျန်ရစ်မယ့် အဖြစ်တစ်ခုလား..
ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ကြတယ်.. ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်..
ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်ခံစားခဲ့ရသည် ဖြစ်ပါစေ…
ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်… မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်…
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံကို ချီတက်ချင်လှပါပြီ.. မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ပင်ပန်းနေမယ့်အစား..
ဘ၀တစ်ခုစာ သွားရမယ့် ခရီးက တိုတောင်းလွန်းတာမို့….လေ
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်စေချင်လှပါပြီ…
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့.. ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း သင့်မြတ်စေချင်လှပါပြီ..
မိသားစု ဆိုတာကြောင့် တစ်ခါ တစ်လေ. ရန်ဖြစ်ကြတာကလွဲရင်..
မခေါ်မပြောနိုင်လောက်အောင် စိတ်ဝမ်းကွဲနေတာကြီးကို မုန်းလှပါပြီ….
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ…
သူ့ဘ၀ရဲ့ ဇရာဆိုတဲ့ အချိန်မကုန်ခင်.. ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်အကျွေးပြုတာကို
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို အတိုက်အခံလုပ်တယ်ဆိုတာထက်..
လျှပ်စီးတွေလက်ပြီး.. မိုးတွေရွာနေတဲ့ ညမျိုးမှာ.. လမ်းပျောက်နေသူတွေ… မိုးမလုံလို့..ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ… အသည်းအသန်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာအတွက်.. ဆေးဆရာပြေးခေါ်နေကြရသူတွေ.. ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသူတွေ…
ကဲ့သို့သော ဆင်တူသော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်..
လွပ်တော်ထည်းမှာ အော်လိ်ု့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဂျီးတို့အဖွဲ့တွေရေ အော်ကြပေတော့
ဘာတံခါးဖွင့်ပါ ညာတံခါးဖွင့်ပါ ဆိုပြီး လာအော်နေတဲ့သူတွေကိုတော့
မိမိတို့အရက်သမားများ လွှတ်တော်မှ သက်ညှာတော့မည်မဟုတ်ပါကြောင်း
ကို ကြောင်ကြီးနဲ့ ကိုခိုင် ကျွန်တော့် ကွန်မန့်က ဘာလို့ moderate ဖြစ်နေတာလဲ။
RFA က သတင်း မှားတယ်ဆိုတာ အောက်က လင့်တွေမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ ၁ ဖက်ထဲကို ချည်းပဲ ကြည့်ပြောနေလို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။
မောင်အီးရိုးစ်ကလည်း ပစ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ.. သိပ်လောမကြီးပါနဲ့ကွယ်။ ဂျွန်မက်ကိန်းနဲ့ဒေါ်စုသတင်းက ဂျွန်လ၂ရက်နေ့သတင်း၊ အာအက်ဖ်အေမြန်မာပိုင်းမှာ တင်လိုက်တာ ၄ရက်နေ့စွဲနဲ့၊ ကိုကြောင်ဖွလိုက်တာ ၅ရက်နေ့ နေ့ချင်းတူပါဘူးကွယ်။ အစိုးမရသာ ခွင့်ပြုချင်ရင် နောက်တနေ့ထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာတင် ပါခွင့်ပြုရမှာပေါ့။ ဂျွန်လ၃ရက်နေ့ထုတ် အကုသိုလ်ဂျာနယ် (the vice အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးပေါင်းမှားရင် ဗွေမယူပါနဲ့နော်) မှာ ဆီနိတ်တာမက်ကိန်းနဲ့အဖွဲ့ပုံသာပါတယ်။ ဂွန်လ၅ရက်နေ့စွဲနဲ့ အလဲဗင်းဂျာနယ်မှာတော့ နှစ်ဦးစလုံးပုံပါတယ်။ ဆူပါအင်တာနက် ဟိုက်စပိဒ်ခေတ်မှာ သုံးရက်လောက်နောက်ကျရင် သတင်းတခုရဲ့တန်ဖိုး ဘယ်လောက်ကျသွားမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါကွယ်။ တခုပဲပြောချင်တာ အစိုးမရက ဂျာနယ်တွေမှာ ခွင့်ပြုလိုက်တာ အမေရိကန်ဒုံးပျံရန် ကြောက်လို့လဲမဟုတ်ဘူး၊ ဒေါ်စုဆဲမှာစိုးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုတာတော့ ဝေလာဝေးပေါ့။ မန်းဂေဇက် ပါဝါကြောင့်လားလဲ ယောင်လို့တောင်မတွေးလိုက်ပါနဲ့၊ ဂေဇက်သဂျီးက သစ်တတန်လောက်ချပေးလိုက်ရင် ဓာတ်ပုံကိစ္စကို လွှတ်တော်အမတ်တွေဆီ စာပို့တောင်းဆိုဖို့ လေသံပြောင်းသွားမှာပါ။ သူတို့ကြောက်တာ ကိုကြောင်ကြီးလေ၊ ကြောင်မြည်သံတချက်ဟိန်းရင် နာဂစ်လေမုန်တိုင်း ဆယ်ခါတိုက်တာထက် ပြင်းတယ်ဆိုတာ သိထားလို့ပါ။ မကြောက်ပါနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရယ်၊ ကြောင်ကြီးဘောင်းဘီချွတ်တာ သေးပေါက်မလို့ပါ…
မောင်အီးရိုးစ်ရဲ့ မှတ်ချက်တက်မလာတာကတော့ လင့်ခ်တွေပါနေလို့ moderate မိနေတာပါကွယ်။ နောက်ဆို သဂျီးချက်ချင်းဖတ်မိပြီး ခွင့်ပြုနိုင်အောင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ပိုတိုသွားတဲ့ပုံလင့်ခ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါက်တာချက်ကြီးထဲက လင့်ခ်လေးဖြစ်ဖြစ် တွဲထည့်ပေးလိုက်ပါကွယ်….
အဆွေတော် ကြောင်ကြီး၏ လင့်ခ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုချက်အား အထူးပင် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိကြောင်း အရင်ဦးစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။ နောင်အခါများမှာ လည်း အဆွေတော် ၏ အကြံပြုချက်အား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆွေတော်ကြောင်ကြီး နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွာထဲမှာ အတူတူရေးဖော်ရေးဖက် များဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ အဆွေတော်၏ အပြုသဘောဆောင်သော မှတ်ချက်အား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဘက်မှလည်း ကျွန်ုပ် သေချာမသိသော်လည်း အချိန်နှင့် သတ်မှတ်ပြီး သတင်းတင်ရ သဖြင့် နှောင့်နှေးမှုရှိနိုင်ပါကြောင်း နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ဟုထင်မြင်မိကြောင်းကို နားလည် သဘောပေါက်စေလိုကြောင်း။ အနှစ်ချုပ် ပြောကြားလိုသည်မှာ တဖက်တည်း ကို မကြည့်ကြစေလိုပဲ ဘက်နှစ်ဘက်ကို ကြည့်မှ မှန်ကန်ကြောင်းမြင်နိုင်ရန် လမ်းစ ရနိုင်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကဲ ဒီလောက်ဆို အာရ်အက်ဖ်အေ မှန်လားမှားလား သိနိုင်ပါပြီ။
နိုင်ငံခြားသားမှ အထင်ကြီးတဲ့ရောဂါ ဆိုတာ တောသားတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
အုပ်ချုပ်‌နေတဲ့‌ကောင် ကြီး‌တွေကို ကြည့်အုန်း‌လေ ဘယ်ဘဝကလာ ကြတာလဲဆိုတာ :D